यस कारण हात तथा खुट्टा झुम्म हुने - ज्ञानविज्ञान
यस कारण हात तथा खुट्टा झुम्म हुने
यसरी हात या खुट्टा निदाउँदा शरीरमा कुनै चोट पुग्दैन । तर केही समयमा लागि अनौठो महसुस हुन्छ । कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाएको वा झुम्म भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । प्रायजसो मानिसले खुट्टा निदाउँदा एकछिन त निकै पीडा हुन्छ ।
Topics #कारण #झुम्म
Don't Miss it एक्स–रे गल्तीले आविष्कार भएको थियो
Up Next अब घरेलु उपायबाट नै पुरुषको कपाल झर्न मुक्त
हामीले जे जति खान्छौ, सबैकुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ । कतिको पचाउने क्षमता त एकदमै कमजोर हुन्छ । यस्तो व्यक्तिको अनुहार…
किन आउछ शरीरमा मुसा, कसरी हटाउने ?
गर्मीमा लामखुट्टेले थुप्रै रोग सार्ने भय रहन्छ, त्यसैले लामखुट्टे भगाउने विधी यस्ता छन्
१. कपुरलाई पनि लामखुट्टे भगाउने काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । एउटा कोठामा कपुर जलाउने र सबै झ्याल-ढोका बन्द गरिदिने । १०-१५…
आँखाको तेज बनाइ राख्न नियमित व्यायम गर्नुहोस
दुई हप्तापछि ट्रेडनिलमा दौडिएका पहिलो समूहका मुसाहरु दैनिक ४ घण्टा चहकिलो प्रकाशमा विताइरहेको पाइयो । तर स्थिर रहेका दोस्रो समूहका…